काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा...
– राजकुमार पराजुली काभ्रेपलाञ्चोक । आजकाल बेतालमा आउने हुरीबतास र पानीले चन्द्रमाया मानन्धरको मुटु झस्काइरहन्छ । जस्तापाताले घेरेको र जस्तापाताले नै छाएको र त्यसमा पनि त्रिपाल र बोराले टालटुल गरेको टहरो पनि उडाएर भएको बास पो उखेल्ने हो कि १ पानी पर्न थालेपछि भएभरका भाँडाकुँडा टहरोभित्रै थाप्नुपर्ने अर्को पीडा पनि त छ उहाँलाई । साथमा रहेका अबोध दुई छोरीलाई च्यापेर...
–पवित्रा घिमिरे पाल्पा । ‘प्रेमको प्रतीक’ रानीमहलको संरक्षणलाई बचाउन आग्रह गरिएको छ । पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीको बृहत् छलफलले ताजमहलजस्तै रानीमहललाई पनि विश्वमा नै चिनाउनुपर्ने पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वाणिज्य उपाध्यक्ष शैलेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो । दैनिक हजारौंँ पर्यटक आउने स्थानमा राम्रो बास, खानेपानी...
काठमाडौं । चाबहिल जोरपाटी सडक अस्तव्यस्त अवस्थामा गुज्रिएको छ । बढ्दो सवारी साधनको चाप र हालै कालोपत्रे गर्न शुरु गरेको सडकमा एकतर्फि बाटो हुँदा सडक अस्तव्यस्त हुन गएको छ । केहीदिन अघि मात्र बौद्ध–जोरपाटीका व्यापारीहरुले बाटोमा धेरै धुँवा उडेको र सडक पूर्णरुपमा जीर्ण भएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनलाई शान्त पार्न सरकारले त्यस क्षेत्रमा केही ठाउँमा कालोपत्रे...
काठमाडौं । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ । यस अवस्थामा भएका घटनाले पछिसम्म नराम्रो परिणाम दिने गर्छ । अझ यसको असर वैवाहिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच वैचारिक मतभेद हुनु सामान्य कुरा हो । केही कुरामा मतभेदका कारण झगडा हुनु पनि सामान्य नै मानिन्छ । तर, उक्त रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो दुर्घटना समेत...
–लक्ष्मी भण्डारी क्रान्तिलाई मैले सलाम गरिसकेंँ क्रान्तिले मलाई सलाम फर्काउन बाँकी नै छ । वीरेन्द्रनगर । दशकौंँअघि क्रान्तिकारी कवि गोपालप्रसाद रिमालले लेखेको कविता अहिले पनि नेपालको बदलिँंदो राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ, खासगरी पिछडिएका र सीमान्तीकृत नेपाली समुदायका लागि । सामन्तवादको किल्लाका रूपमा रहेको राजतन्त्रले बिदा...
–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ । बाराको फेटा गाउँपालिका– ६ का ३३ वर्षीय मुनाफ अन्सारीको परिवार आइतबार साँझ सपरिवार बरण्डामा बसेर सुखदुःखका कुरा साट्दै थिए । साँझको अन्दाजी ७ः३० बजेको थियो । एक्कासी असिना पानी प¥यो । एक्कै छिनमा नसोचेको हावाहुरी (हुण्डरी) आयो । ‘पूरै जमिन नै घुमे झैं गरी भुँमरी प¥यो, गाउँ नै उडाउन थाल्यो, घर भकाभक ढल्न थाल्यो,’ हिजोको घटना सुनाउँदै...
भक्तपुर – भक्तपुर दुवाकोटकी ५३ वर्षीया मीना आलेमगर आइतबारदेखि शुरु हुने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसइईको तयारीमा व्यस्त छन् । यस वर्षको एसइईमा सहभागी हुने भएपछि घरधन्दाका अतिरिक्त उनलाई पढाइको चटारो थपिएको छ । उनको १६ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । हाल एक छोरी र दुई छोराकी आमा आलेमगरको सानोमा पढ्ने रहर पूरा भएन । त्यसैले २०६९ सालबाट आस्था महिला विद्यालयमा भर्ना भएर...
काठमाडौं । २०७६ सालमा सरकारले जम्मा १५ दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ । शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गृह मन्त्रालयले देशैभरी विदा हुने गरी जम्मा १५ दिनमात्र सार्वजनिक विदा दिएको हो । वैशाख महिनामा सरकारले नयाँ वर्षका दिन वैशाख १ गते आइतबार र विश्व मजदुर दिवसका दिन वैशाख १८ गते बुधबार देशभर सार्वजनिक विदा दिइएको छ । जेठ महिनामा एक दिनमात्र ४ गते शनिबार सार्वजनिक विदा...
एजेन्सी । ‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसरमा कयौं मानिसहरुको मायाको खोज पुरा हुन्छ । केही भने सिंगल नै रहन्छन् । तपाईं पनि यो ‘भ्यालेन्टाइन डे’मा सिंगल हुनुहुन्छ भने चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनकि सिंगल पनि तपाईंलाई कयौं फाइदा हुने गर्छ । यहाँ त्यसैको चर्चा गरिएको छ । डेटलाई कसरी ‘पर्फेक्ट’ बनाउने टेन्सन नै हुँदैन ‘भ्यालेन्टाइन डे’मा सिंगल हुनुको सबैभन्दा पहिलो...
आफ्नै खर्चमा समाज सेवा गर्ने संस्था ‘विकल्पका लागि आवाज नेपाल’
रोशन ज्ञवाली सामाजिक सञ्जाल, साथीभाई भेटघाट अनि घुमघाम अनि मनोरञ्जन गर्ने उमेरमा देशका कुना कुनामा रही आएका शैक्षिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर थुप्रै समाधानका बाटो अपनाएर संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै विभिन्न क्रियाकलाप गरी समाजसेवाको उत्कृष्ठ उदाहरण दिन सफल युवाको समूह हो– विकल्पका लागि आवाज नेपाल । आफूसँग छुटपुट खर्चका रकम मात्र हुँदा होस् वा पढाईको खर्चमा लाग्ने रकम...
इजिप्टका महिलाहरू यौन शक्ति बढाउने भियाग्रा खान्छन्, पढौं विवरण
इजिप्ट महिलामा यौनेच्छा बढाउने औषधिको उत्पादन र वितरण गर्न अनुमति दिने पहिलो अरब राष्ट्र बनेको छ। बीबीसीकी स्याली नबिलले इजिप्टजस्तो रूढीवादी देशमा यसको बजार कस्तो छ भनेर बुझेकी छन्। पढौँ यो विवरण ढुकुढुकी बढ्यो “मलाई निद्रा र रिङ्गटा लागेजस्तो भयो र मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो।” ‘फिमेल भायग्रा’ भनिएको औषधि सेवन गरेपछि लेलाले यस्तो अनुभव गरिन्। महिलाका लागि बनाइएको सो...
एजेन्सी । संसारका दुई ठूला पोर्न वेबसाइटले वर्षको अन्त्यमा प्रयोगकर्ताले के खोज्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । चर्चित पोर्न वेबसाइट पोर्नहब र युपोर्नले तथ्यांकको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले के खोज्छन् भन्ने सार्वजनिक गरेका हुन् । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार एक खास किवर्ड पुरुषले भन्दा महिलाले बढी सर्च गरेका छन् । दुवै वेबसाइटको वार्षिक रिभ्यूअनुसार सबैभन्दा बढी सर्च...
वंशजको परिभाषा के ? बाबुमात्र वा आमा पनि ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशजको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले वंशज भनेको बाबुमात्र हो वा आमा पनि हो भन्ने विषयमा कानून बनाउन प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । संशोधनकर्ता सांसद...
मोटी केटीसँग बिहे गर्दाका ६ फाइदा
१) मोटी केटीसँग बिवाह गरेपछि सपिङमा तपाईको पैसा खर्च हुने छैन । किनभने मोटी केटीहरु कपडाका बारेमा धेरै सौखिन हुँदैनन् । उनीहरु नचाहिने काममा धेरै पैसा खर्च गर्दैनन् । २) मोटी केटीहरु पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन् । मोटी केटीको मनमा कसैपृति घृणाभाव हुँदैन । साथै मोटी केटी आफ्नो घर पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन् । ३) वैज्ञानिक खोजबाट पनि यो पत्ता...
काठमाडौं । ज्योतिषशास्त्रमा बताइएका अनेकथरी उपाय अपनाउँदा सबै किसिमका मनोकामना पूरा हुन्छन् । यहाँ हामी केही सरल उपाय बताउँदैछौं जसलाई अपनाउँदा तपाईंले धन कमाउन सक्नुहुन्छ । १. घरकी प्रमुख महिलाले बिहानै सूर्योदयअघि नै उठेर तामाको लोटामा जल भरेर मुख्य द्वारमा छर्किएमा देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुनेछ र त्यो घरमा कहिल्यै दरिद्रता आउँदैन । २. बुधवार लक्ष्मीको आगमनको दिन हो...
–विष्णु नेपाल झुम्का । सविना चौधरीः दिदी छ ? चन्द्रा चौधरीः के छ भनेको ? छैन, छैन । श्रीमान्लाई नै लिन पठाइदेऊ, कहाँ जानुभो र उहाँ ? “होइन, दिदी नलिइकन जान्न है म त ।” सविनाले थपिन् । “श्रीमान्का लागि ढाल (परिवार नियोजनको अस्थायी साधन) लिन आएकी हौली होइन ? के भन्छ्यौ भनेर सोधेको नि !” यी संवाद विगत ६ वर्षदेखि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, सुनसरी जिल्ला शाखा झुम्काद्वारा...
कतिय मानिस जाडो महिना शुरु भएसँगै आनन्दमय सेक्सको मज्जा लिन नपाइने भयो भनेर चिन्तिन हुने गरेको सुनिन्छ । त्यसको एउटै कारण हो अत्यधिक चिसोको कारण कपडा खोलेर सेक्स गर्न नपाउनु । जाडोमा प्रायः पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु कपडा खोलेर सेक्सको आनन्द लिन चाहँदैनन् । अझ भन्नुपर्दा महिलाहरु जाडो महिनालाई भन्दा गर्मी महिनालाई सेक्सका लागि उपयुक्त ठान्दछन् । तर, पुरुषहरु भने गर्मी...
महिलाको लागि हस्तमैथुन लाभदायक कि हानीकारक ?
एजेन्सी। महिलाको लागि हस्तमैथुन लाभदायक हुन्छ कि हानीकारक ? यस विषयमा कमै बहस हुने गरेको छ । एक अनुसन्धानअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरुले कम्तीमा एक पटक हस्तमैथुन गरेको पाइएको थियो । इंडियाना युनिभर्सिटीको सर्वेक्षण अनुसार २५ देखि २९ वर्षको उमेरको बीचका ७.९ प्रतिशत महिलाहरु हप्तामा २ देखि ३ पटक हस्तमैथुन गर्छन् । अर्कोतर्फ २३.४ प्रतिशत पुरुष हप्तामा ३ देखि ४ पटक...
राती भन्दा बिहानीपख सेक्स गर्नु उत्तम !
विज्ञहरू भन्छन् सेक्स गर्ने निश्चित समय नै हुँदैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । र अन्य समय सेक्स गर्नुलाई खराब मान्ने गर्दछन् तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हो, यो विभिन्न् अध्ययनहरूबाट प्रमाणित भइसकेको छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई...
यौन सम्पर्क गर्नु अघि के चाहन्छन् महिला ?
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको अध्यनबाट...
महिलाले स्तन देखाए सजाय दिने यी हुन १५ देश
समाजमा बिना कपडा हिन्न पाउने मागका साथ विभिन्न राष्ट्रहरुमा महिलाकर्मीहरुले क्याम्पिन नै चलाउने गर्छन् । तर, विश्वमा केही यस्ता राष्ट्रहरु रहेका छन् जहाँ स्तन देखाएमा कडा सजायको भागिदार हुनुपर्छ । महिला पक्षमा कानुन नभएको भन्दै बेलाबेला यस्ता देशहरुमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । आउनुहोस् हेरौ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा कस्ताकस्ता सजाय दिइन्छ यी देशहरुमा( १...
यसकारण मलाई यौनकर्मीकोमा जाने लत लाग्यो
बीबीसी । त्यो निकै अविस्मरणीय रात थियो । २८ वर्षमा पहिलो पटक कुनै महिलालाई स्पर्श गरेको थिएँ । यसले कुनै फरक पारिरहेको थिएन कि ती महिला मेरी श्रीमती नभई एक यौनकर्मी थिइन् । मेरा इच्छा पूरा भइरहेको थियो, त्यसकारण म खुसी थिएँ । त्यो अनुभव एक हप्तासम्म मेरो दिमागमा जिउँदो थियो । यस्तो लागिरहेको थियो कि म भिन्न दुनियाँमा छु । र यस्तो पनि किन नहोस् ? मेरो विवाह हुन सकिरहेको थिएन ।...
४० वर्ष कटेका महिलाहरु किन यौन प्रक्रियामा सक्रिय बन्छन् ?
एजेन्सी । जीवनको सन्तुष्टि विषयमा गरिएको अध्ययनले महिलाले आफ्नो जीवनको चालिसको दशकमा अन्य उमेरमा भन्दा वढी यौन आनन्द लिने र यौनमा बढी सक्रिय रहने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनले चालिसका दशकका महिलाहरुमा यौन सक्रियता बढ्ने र अरु बेलाभन्दा शरीर स्वस्थ्य रहने, कन्फिडेन्स बढ्ने तथा सम्वन्ध पनि अरु बेलामा भन्दा प्रगाढ हुन्छ । तर यौनका मामिलामा भने चालिसको दशकमा महिलाले आफनो...
नग्न युवतीको सफाई गरेर कमाउने छुटै तरिका
मेलबोर्न, भदौ ३१ गते । घरको सफाई गरे कति पैसा कमाउन सकिन्छ होला ? शायद ५ वा १५ हजार रुपैयाँ सम्म सोच्नुहुन्छ होला । तर घरको सफाई गरेर एउटी केटीले हरेक महिनाले झण्डै ५ लाख भन्दा धेरैं रुपैयाँ कमाउँछिन । आश्चर्य नमान्नुहोस, यो सत्य नैं हो । पैसा कमाउन उनि हप्तामा मात्रैं १६ घण्टा काम गर्छिन । हो यो सत्य हो । कसरी हरेक महिना धेरै रुपैया कमाउँछ ? वास्तवमा, यी केटीले हप्तामा मात्र १६...
वक्षस्थल बढाउने होडबाजी !
एजेन्सी, भदौ २७ गते । अहिले ब्राजिलियन बट लिफ्ट अर्थात् बिबिएल फेसन यस्तो गरी बढिरहेको छ कि मानिसहरु आफ्नो ज्यानसम्म दाउमा लगाइरहेका छन् । एकजना महिला, जो ३ सन्तानकी आमा हुन् उनी यहीँ सर्जरीका लागि इंगल्याण्डबाट टर्की पुगिन् र उक्त ज्यानमारा सर्जरीका क्रममा उनको मृत्यु भयो । टर्कीको इजमिर सहरस्थित एक क्लिनिकमा नितम्ब बढाउने शल्यक्रियाका क्रममा उनलाई तीनपटक हृदयाघात भयो ।...
केटा नपाएपछि ब्राजिलका युवतीहरु केटाको खोजीमा
एजेन्सी, भदौ १९ गते । विवाह गर्न केटा नपाएपछि ब्राजिलका युवतीहरु युवतीहरु सामुहिक रुपमा केटाको खोजीमा गर्न थालेका छन् । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाउँमा ६ सय जान अविवाहित महिलाहरु रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश ३५ वर्ष मुनिका रहेका छन् । ६ सय जना अविवाहित महिला भएको गाउँमा १ जना पुरुष पनि अविवाहित नरहेको पाइएको छ । तर महिलाले नै भरिएको त्यो शहरमा महिलाकै बोलवाल रहेको छ...
नेटगियर आइसिटी अवार्ड २०१८ सम्पन्न
काठमाडौं, भदौ २ गते । लिभिङ विथ आइसिटीको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको ‘नेटगियर आइसिटी अवार्ड २०१८’ सम्पन्न भएको छ । ‘सूचना प्रविधिमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी’ मूल नारासहित शुक्रबार राजधानीमा भएको एक समारोहमा विभिन्न ७ विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान गरियो । विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट भएका विजयीहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासहित विशिष्ट...
राम नारायण पंडित सिरहा, साउन २८ गते । साउन महिनाको सुरुवातसंगै शिवालयहरुमा भिड्भाड् र बोलबम जानेहरुको संख्यामा ह्वातै बृद्धि भएको छ । साउन महिनामा परेको सोमबारको दिन सोमबारी ब्रत बस्नाले चिताएको मनोकामना पुरा हुने गरेको बमहरुले बताउँछन् । असल श्रीमान पाउँने उद्ेश्यले आफुहरु साउनमा सोमवारी व्रत बस्ने गरेको महिलाहरु बमहरुले बताउछिन् । महिलाहरु हातमा मेहन्दी, चुड्ी र हरियो...
शहरिया महिला नै बेचिन्छन् प्रलोभनमा परेर
–नारायण अधिकारी । चितवन, साउन १५ गते । दूर्गम र पहाडी क्षेत्रका निरक्षर मात्र होइन, शहरका शिक्षित महिलाहरु पनि मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा जागिर खाँदै गरेका र शिक्षित महिलाहरुसमेत बेचबिखनमा परेका हुन् । महिलाहरुको पुनःस्थापनामा क्रियाशील आदर्श नारी गृहकी सलाहकार मीना खरेलका अनुसार एउटा बैंकमा तल्लो तहमा काम गर्दै गरेकी एक महिलालाई उद्धार...
बालकुमारीमा संगीतमय साँझ
बाबुकाजी श्रेष्ठ मध्यपुर थिमि, १३ श्रावण– युवाहरुलाई सकारात्मक सोच, शिक्षामा दक्षता र क्रियाशील बनाउने सगरमाथा समूहले “व्यावहारिक ज्ञान र अनुभवका लागि नौलो चिन्तन र नविन दृष्टिकोष” भन्ने मूल नाराका साथ १६ औं वार्षिकत्सोवको उपलक्ष्यमा सगरमाथा संगीतमय सा“झको आयोजना गरियो । प्रदेश नं. ३ का आन्तरिक तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमक“टेलले पानसमा दीप प्रज्वलित गरी...
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा महिलाले एक जना अर्थात आफ्नो श्रीमानसँग मात्रै यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ । जसका कारण महिलाहरु अन्य पुरुषसँग यौन चहाना राखेपनि समाजले पूरा गर्न दिँदैन् । तर विकसित देशमा यौनसम्बन्ध खुला छ । जसले जो सँग गरेपनि हुने । अध्ययन अनुसार विश्वका कतिपय देशका महिला पुरपुरुषसँगको यौनसम्बन्ध आनन्ददायी हुने बताउँछन् । अध्ययन अनुसार...
काठमाडौं, साउन ८ गते । बालबालिका र जनावरबीचको मनोवैज्ञानिक सम्बन्धमाआधारित नाटक ‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कूलब्वोई’ कौशी थिएटरमा मञ्चन हुँदैछ । ‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कूलब्वोई’ आज (मंगलबार)बाट आगामी साउन १३ गतेसम्म मञ्चन हुने छ। नाटकमा बालबालिका र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नाटकको संयोजन एवं निर्देशन चे शंकरले गरेका छन्। निर्देशक चे शंकरकाअनुसार...
देवबहादुर कुँवर काठमाडौँ, साउन ४ गते । गलत नियतले महिलामाथि ‘कर्के नजर’ लगाउनु कानुनी रुपमा अपराध हो भन्ने कुरामा कतिको सचेत हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहुन्न भने अब सचेत बन्नुहोस् । सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कम्पनी र कार्यालय स्थलमा महिलालाई एकोहोरो हेर्ने, होच्याउने, जिस्क्याउने, संवेदनशील अङ्ग छुन खोज्ने लगायतका व्यवहारलाई प्रचलित कानुनले यौनजन्य �...
सुन्दरीहरुको फोटो नखिँच्न फिफाको चेतावनी
काठमाडौं, असार ३० गते । रुसमा भइरहेको विश्वकपमा खेलाडीसँगै सुन्दरी महिलाहरूले पनि दर्शकको ध्यान आफूतिर तानेका छन् । यसैक्रममा फिफाले महिलाप्रति क्यामरा धेरै फोकस गर्ने प्रसारकहरूलाई चेतावनी समेत दिएको छ । फिफाले सुन्दरी महिलाहरुलाई मात्र केन्द्रीत गरेर फोटो खिँच्नुलाई लैंगिक भेदभाव भनेको छ । खेल दौरान क्यामेराम्यानले सेक्सी देखिरहेका महिला र केटीहरुलाई ध्यान...
नुवाकोट, असार २९ गत । अविरल वर्षाका कारण यहाँको प्रसिद्ध भैरवी मन्दिर र वरपरको बस्ती जोखिममा परेको छ । विदुर नगरपालिका–२, नुवाकोटस्थित पृथ्वीनारायण शाहकालीन भैरवी मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा गए रातिको पानीले गएको पहिराको कारण सम्पदा र मानव बस्ती जोखिममा परेको हो । विदुर –२ धारापानी क्षेत्रमा बस्ती र नजिकै रहेको भैरवी मन्दिर र मन्दिरका पुजारी धामी हरिमानसिंह डंगोलको निवास...
सेक्स गर्दा महिलालाई यस्ता हुन्छन् फाईदा
एजेन्सी, असार १९ गते । के तपाईंलाई थाहा छ, सेक्स गर्नाले महिलाको तौल घट्छ, छाला चम्किलो हुन्छ र मुटुको रोगहरु पनि लाग्दैन। महिलाहरुका लागि सेक्स किन आवश्यक छ र यसको फाइदा के हो थाहा पाउनुहोस्ः दुखाईबाट मुक्तिः दुखाइबाट मुक्ति दिन सेक्स प्राकृतिक औषधी हो। सेक्स गर्नाले अक्सिटसिनलाई नष्ट गर्ने गर्दछ र यसले कुनै पनि पिडा र दुखाई कम गर्दछ। स्वस्थ छालाः डीएचएक नामक हर्मोन एउटा...
रोल्पामा कला उत्सव हुने
काठमाडौँ, असार १७ गते । रोल्पामा कला उत्सव हुने भएको छ । सुनछहरी साहित्य तथा कला समाजको आयोजनामा महोत्सव हुन लागेको हो । महोत्सवबारे आइतबार सदरमुकाम लिवाङमा पत्रकार सम्मेलनगरी जानकारी दिइयो । कला साहित्य समाजका अध्यक्ष महेश मानवका अनुसार कला उत्सवमा राष्ट्रिय स्तरका कवि, लेखक, साहित्यकार तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहने छ । महोत्सवमा ‘रोल्पादेखी रोल्पा सम्म’,...
के जुवा र सेक्सको लत उस्तै हो ?
रचेल श्रायल काठमाडौं, असार ११ गते । हामीले निकोटिन, रक्सी र लागुऔषधजस्ता नशालु पदार्थको लतलाई स्विकार गरेका छौं । यसले पुर्याउने क्षतीलाई पनि स्विकारेका छौं । तर यदि सेक्सको लतको कुरा आए विशेषज्ञको धारणा बाँडिएको छ । केहीले सेक्सको लतलाई स्विकारेका छन् भने कतिले अस्विकार गर्दै आएका छन् । सेक्सको लतलाई अहिले रोगको रुपमा लिइएको छैन त्यसकारण कति मानिसले यसका लागि चिकित्सकीय...
किर्तिपुर, असार १० । किर्तिपुर नगरमा पर्यटक प्रर्वद्धनको प्रबल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई साकार बनाउन चरणबद्ध कार्यक्रमको खाँचो औल्याइएको छ । किर्तिपुर नगरपालिकाको सहयोग र नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको आयोजनामा शुक्रबार किर्तिपुरस्थित नयाँबजारमा भएको किर्तिपुरको संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा �...
कामाछिरिङले बनाए हिमाल आरोहणको वृत्तचित्र
काठमाडौं । हिमाल आरोही कामाछिरिङ शेर्पाले हिमाल आरोहण, समस्या समाधान र हिमाल आरोहणका नायक शेर्पाहरुको जीवनमा आधारित वृत्तचित्र निर्माण गरेका छन् । शेर्पाले लामो समय लगाएर वृत्तचित्र तयार पारेका हुन् । उनले सो वृत्तचित्रमा नेपालका हिमालहरुको महत्वलाई प्राथमिकतासाथ उठाउएका छन् । शेर्पाले आफैंले पनि दुई पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरी सकेका छन् । उनले आफुले सगरमाथा...
विश्वकै वृद्ध ‘ओराङ्गुटन’ को मृत्यु
एजेन्सी, असार ६ गते । विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध सुमात्रन ओराङ्गुटनको ६२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ। उसको अस्ट्रेलियाली चिडियाखानामा मृत्यु भएको हो। हाल उनका ५४ वंशज जीवित छन्। बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित जटिलता बढेपछि प्वान नाम गरेकी पोथी ओराङ्गुटनलाई पर्थको एक चिडियाघरमा चिर निद्रामा सुताइएको हो। प्वानलाई सन् १९६८ देखि सो चिडियाखानामा राखिएको थियो। सन् २०१६ मा गिनिस...
कसरी बनाउने वक्षस्थललाई आकर्षक ?
महिलाको समग्र सौन्दर्यको एउटा हिस्सा हो, स्तन एवं वक्षस्थल । यद्यपी स्तनको बनौट वा वान्कीले त्यस कुराको निर्धारण गर्छ, त्यो आकर्षक छ÷छैन भन्ने कुरा । सौन्दर्यको मानक अनुसार स्तन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको मापदण्ड हुन्छ । यद्यपी स्तन झोलिएको हुनसक्छ । शिथिल हुनसक्छ । धेरै भद्दा हुनसक्छ । अस्वभाविक सानो हुनसक्छ । यस किसिमको स्तनलाई आकर्षक मानिदैन । गर्भावस्था,...
हिन्दू परिषद नेपाल प्रदेश न.२ को बिस्तारिक बैठक सम्पन्न
बीरगंज, जेठ २० । हिन्दू परिषद नेपाल प्रदेश न. २ को बिस्तारित बैठक गहवामाई अतिथि सदन बिरगंजमा सम्पन भएको छ। गहवामाई मन्दिरमा पूजापाठ गरी शुरू भएको बैठकले ५ बुदे निर्णय गर्दै सम्पन भएको महासचिव प्रमोद सिहले बताए। प्रदेस न.२ का अध्यक्ष सचितनन्द दुबेको सभापतित्वमा संम्पन बैठकमा केन्द्रिय अध्यक्ष संतोष पटेल,प्रवक्ता श्रीराम उपाध्याय, सह(कोषाध्यक्ष संजय सरार्फले शुभकामना सहित...
काठमाडौं जेठ २९ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शन प्रतियोगिता हुने भएको छ । द लिभिङ डिभाइन फाउण्डेसनको ५औ स्थापना दिवसका अवसरमा समुदायका व्यक्तिको प्रतिभा देखाउने प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । १६ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्मका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका कुनै पनि सदस्यले आवश्यक विवरण सहित फर्म भर्न पाउने छन् । फर्म निःशुल्क भर्न...
बबई नदी तटबन्धन तीव्र
गुलरिया, बर्दिया । बबई–भादा– औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बबई नदीले गर्ने कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि शुरु गरेको तटबन्ध निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । छयालीस किलोमिटर क्षेत्रफल तटबन्धन गर्दै बारबर्दिया गुलरिया जोखिम क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित गर्न लागिएको छ । तीन वर्षभित्र बर्दियालाई पूर्णरुपमा सुरक्षित गर्ने योजना छ । योजनानुसार रु तीन अर्ब ९२ करोड लागतमा २८...
एनयसयू टेक फेस्ट आयोजना हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघको आयोजनामा जेठ २६ गते एकदिने ‘एनयसयू टेक फेस्ट’ २०७५ को आयोजना गरिने भएको छ । नेविसंघकी केन्द्रीय सदस्य एवम् इ.मेली शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न क्लेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी एव्म सिर्जनशिल उद्यमीहरुलाई लगानीको वातावरण र्सिजना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन । राजधानीको अन्नपूर्ण होटेल...
काठमाडौं । सम्बलद्वारा मंगलबारदेखि आरम्भ हुने ‘झुमकी यात्रा ः महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त आवाज’ का लागि कलाकारहरूको एक टोली प्रदेश २ का लागि प्रस्थान गरेको छ । बलात्कार पीडित महिलाको कथामा आधारित पत्रकार अनिलकुमार कर्णको नाटक झुमकीको प्रदर्शन र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध जनमत निर्माणका लागि सो टोली मंगलबारदेखि प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा पुग्नेछ । प्रदेश २ जानुपूर्व...
एक महिनामा कतिपटक यौन चरम सुख ? अध्ययन यसो भन्छ
आर्काइभ्स अफ सेक्सुअल बिहेवियर नामक जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अध्ययन अनुसार कतिपय महिलाहरु एक महिनामा ५५ पटकसम्म यौन चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछन् । अझ रोचक कुरा त के भने यति धेरैपटक चरम आनन्द हासिल गर्ने महिलाहरुले कुनैपनि पुरुषसँग यौन सम्पर्क गरेका थिएनन् । उनीहरुले पुरुषसँग होइन महिला पार्टनरसँग नै सेक्स गरेका थिए । यो अध्ययनसँग जोडिएका केही रोचक नतिजा यस्ता...
बेलायतमा ५० प्रतिशत युवाले कण्डम नै प्रयोग गर्दैनन् ? आखिर किन ?
लण्डन । बेलायतमा गरिएको एक सर्भेक्षणका अनुसार १६ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका झण्डै ५० प्रतिशत युवाले पहिलो पटक सेक्स गर्दा कण्डम प्रयोग गर्दैनन् । किन गर्दैनन ? कारण यस्तो छ– धेरै जसोले कण्डमले यौनको स्वादलाई फिक्का गरिदिने अर्थात कण्डमले यौन आनन्दमा कमि ल्याउने बताएका छन् । कतिपयले कण्डम प्रयोग नगर्नुको पछाडी रक्सीलाई कारक ठहरयाएका छन् । मदिरामा मात्तिएका बेला होस हुँदैन्...
युरेशियन मिडिया फोरममा सन्तोष साह छनोट
काठमाडौं । युरेशियन मिडिया फोरममा नेपाली युवा सन्तोष साह छनोट भएका छन् । विश्वका उत्कृष्ट नेतृत्व, मिडियापर्सन तथा थिंक ट्यांकका व्यक्तिहरु सहभागी हुने यो फोरममा यस वर्ष साह छनोट भएका हुन् । काजकस्थानमा मे २२ मा सुरु भएर २४ तारिखमा सम्पन्न भएको यस वर्षको युरेशियन मिडिया फोरममा विश्व परिदृष्यमा देखा परेका नयाँ–नयाँ विषयहरुमा गहन छलफल भएको थियो । यस वर्षको सम्मेलनमा...
करुणा कुँवर, मनोविद म २७ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । एक जना आफन्तले सानै उमेरमा अश्लील चलचित्र देखाइदिएका कारण केही वर्षयतादेखि इन्टरनेटमा अश्लील चलचित्र डाउनलोड गरेर हेर्ने बानी परेको छ । सुरु–सुरुका दिनमा दुई–तीनवटा अश्लील चलचित्र हेर्थें । पहिले यो रमाइलोका लागि थियो भने अहिले लत बनेको छ । त्यस्ता चलचित्र हेर्नु र त्यस क्रममा पटक–पटक हस्तमैथुन गर्नु मेरो नियमितता...
विवाहपूर्व धेरै यौन पार्टनर हुनेको वैवाहिक जीवन सुखमय
काठमाडौं । विवाहपूर्व दुर्इ वा सो भन्दा धेरै सेक्स पार्टनर भएका महिलाहरुको वैवाहिक जीवन एकदम राम्रो हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो एक अध्ययनबाट विज्ञहरुको यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अध्ययन अनुसार बिहे अघि धेरै यौन पार्टनरहरु भएका महिलाहरुमा बिहेपछि सम्बन्ध विच्छेदको घटना अतिकम पाइएको छ । बिहे अघि दुर्इ जनासम्म सेक्स पार्टनर भएका महिलाहरुमा भन्दा तीनदेखि नौ...
राजकुमारको बिहेमा ससुरा मेगन नजाने
लण्डन । बेलायती राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलबीच विवाह हुने भएको छ उक्त विवाहमा मेगनका पिता नआउने भएका छन् । मेगनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना पिता थोमस मार्कल विवाहमा नआउने जनाएकी हुन् । उनीहरूको शनिबार विवाह हुँदैछ । उनको मुटुसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । केही दिनअघि पापाराजीहरूसँगको मिलोमतोमा छोरीको बिहेसम्बन्धी समाचार साइबर क्याफेमा...
ब्ल्याकबोर्डमा कम्प्युटर प्रविधि पढाउने शिक्षक विश्वभर चर्चित
एजेन्सी, फागुन १७-घानाका एक शिक्षकले कम्प्युटर विना नै कम्प्युटर प्रविधि पढाएको विषय अनलाइन सञ्चारमाध्यममा चर्चित बनेको छ। कुमासीका ती शिक्षकले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको चित्र निकै मेहेनतका साथ ‘ब्ल्याकबोर्ड’मा बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिरसहित एउटा स्टेटस लेखेर ती शिक्षकले पोस्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘घानामा सूचना तथा कम्प्युटर प्रविधि...
भ्रष्ट र तस्करहरुको सुचना दिनुस् म एक्सन लिन्छुः गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले भ्रष्ट र तस्करहरुबाट देश आक्रान्त भएको बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री थापाले सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारीहरुलाई एक्सपोज गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्रष्ट र तस्करहरुको सुचना मलाई दिनुस्, गृह मन्त्रालयले तिनीहरुमाथि एक्सन लिन्छ ।’ नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अस्तव्यस्त...
विनोदराज मोक्तान अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । आलोचनाका बावजुद संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न सत्ता लम्बाउनुपरेको जवाफ देउवाले सरकारबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा आफनो सम्बोधनका क्रममा दिए । देउवाको चौंथो प्रधानमन्त्रीकालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण निर्वाचन...
कहाँ चुक्यो काँग्रेस ? कस्तो हुनुपर्छ अब
संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका दुवै चरणका परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली काँग्रेसका लागि देशैभरिबाट निराशाजनक परिणाम आएको छ । योसँगै काँग्रेसको भविष्यबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । ती टिप्पणी कतिपय सकारात्मक र कतिपय पूर्वाग्रही वा विरोधी कित्ताको ‘सनातन धर्म’ पर्छन् । जे जस्ता प्रतिक्रिया आएका छन् ती...
नयाँ संविधान पश्चात सम्पन्न भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नतिजाले वाम गठबन्धनलाई देशको समग्र नेतृत्व सुम्पेको छ। पछिल्लो २ दशक द्वन्दकालिन र संक्रमणकालिन अवस्था भोगेका हामी नेपाली, अब देश समृद्धि तर्फ उकालो लाग्ने कुरामा आशावादी छौँ। यसै क्रममा वाम गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस, मधेसी दल, र भरखरै उदाउँदै गरेको विवेकशील साझा पार्टीप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो...
काठमाडौँ, पुस ११(टिप्पणी )— राष्ट्रिय सभा गठन विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि एमाले नेताहरू स्थायी समिति बैठकका लागि वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीतर्फ लागे । तर वाम गठबन्धनका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने चितवनतर्फ हिँडे । प्रधानमन्त्री निवासको छलफल...
राज्यका सञ्चालक र सिङ्गै मुलुकीप्रशासन एउटा ब्यक्तिबिरुध्द षडयन्त्रमूलक तवरले पछिलाग्योभने त्यो ब्यक्ति कसरि बाँच्तो हो ? यो नवराज सिलवाललाई जसरी’नि सिद्ध्याएरै छाड्छु भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले हात धोएरै पछि लाग्नुभएको यथार्थ स्थिति जगजाहेरै छ। त्यत्तिले नपुगेर खुङ्खार प्रहरीहरुको टोली नै खटाएर सिलवालका परिवार, नाताकुटुम्बहरुलाइ दिनदिनै तर्साउने,...
‘विकासको प्रतिक्षामै बित्यो आधा शताब्दी,कोही भएनन् कुतियाकवरको पीडा सुन्ने’
माहाकाली नगरपालिकाको पारिको बस्ती कुतियाकवर विकासको प्रतिक्षा गरेको आधा शताब्दी भयो तर, त्यहा विकासको आधारभूत पूर्वाधार समेत पु¥याउन सकिएको छैन । यो तीतो यथार्थ सरकार र राजनीतिक दललाई थाहा नभएको होइन तर, उनीहरुले त्यहाका गाउलेलाई दिने भनेको आश्वासन मात्रै हो । त्यस गाँउमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पुग्दा अन्तरक्रिया वा छलफलमा उनीहरु भोलि नै आकाश झारिदिने कुरा...
कानपुर, मङ्सिर ५ । भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुर सहर नजिकै आज बिहान रेल दुर्घटना भएको छ । कानपुरबाट एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानमा भएको उक्त दुर्घटनामा परी कम्तीमा ९६ जनाको ज्यान गएको छ । भारतीय प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार कानपुर सहरको नजिकै इन्डोर–पटना एक्सप्रेसको रेल आज बिहान तीन बजेर १५ मिनेटमा दुर्घटनामा भएको हो । दुर्घटनामा परी दुई सयभन्दा बढी मानिसहरु...
अकल्याण्ड, कात्तिक २९ । न्युजिल्याण्डमा आइतबार गएका दुई शक्तिशाली भूकम्पपछि सरकार उद्धारकार्य तीव्र बनाएको छ । आइतबार न्युजिल्याण्डको दक्षिण टापुमा एक शक्तिशाली भूकम्प गएको एक घण्टापछि छ दशमलव ३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । न्युजिल्याण्डमा सुरुमा गएको सात दशमलव ५ म्यग्निच्युडको भूकम्पमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने सुनामी आउने चेतावनी दिइएको थियो...
वासिङटन, कात्तिक २४ । अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प चुनिएका छन् । मंगलबार भएको निर्वाचनमा दुई सय ७० इलेक्ट्रोल भोट आवश्यक रहेको अवस्थामा यो समाचार तयार पार्दास्म्म उनले दुई सय ९० इलेक्ट्रोल भोट हासिल गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय माहोल हिलारी क्लिन्टनको पक्षमा गएको भएता पनि तेस्रो कार्यकाल एउटै पार्टीलाई नदिने अमेरिकी जनताहरुको परम्परालाई कायम...
वासिङटन, कात्तिक २२ । अमेरिकामा निर्वाचन आउन दुई दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले सफाइ दिएको छ । क्लिन्टनको विरुद्धमा प्रमुख मुद्दा बनाएर निर्वाचनको प्रचार गरेका अर्का उम्मेदवार ट्रम्पलाई भने यो सफाइले केही धक्का पुगेको छ । एफबीआईका निर्देशकले पछिल्लो समय गरिएको सोधपुछमा क्लिन्टनको...
काठमाडौँ, कात्तिक ४ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ)का प्रतिनिधि डा सोमसाक पिपोप्पिन्योले नेपाल वातावरण परिवर्तनको जोखिमयुक्त राष्ट्र रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल भूक्षय, हिउँपहिरो, बाढी, असिना, जङ्गल फँडानी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट अछुतो रहन नसक्ने मुलुक रहेको र सोबाट जोगिन मानिसले माटो र बिरुवाको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्...
कतार एयरवेजले स्मार्टफोनबाट टिकट बुकिङ गर्ने नेपालीलाई छुट दिने
आर्थिक संवाददाता काठमाडौं कात्तिक ३ स्मार्टफोन तथा ट्याब्लेटको माध्यमबाट कतार एयरवेजको टिकट बुकिङ गर्ने नेपाली यात्रुले १० प्रतिशत सम्मको छुट पाउने भएका छन् । कम्पनीले नेपाली यात्रुका लागि सिमित अवधिका लागि यो योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको हो । यात्रुले आफ्ना उपकरणको ब्राउजरमा कतार एयरवेज डटकम टाइपगरी कम्पनीको प्रमोशनल कोड मोबाइलको प्रयोग गरी विश्वभरका १ सय ५०...
लण्डन । २७ वर्षकी लौरा टेक्सीरिय हरेक महिना महिनावारीको क्रममा श्राव हुने रगत जम्मा गरेर उनी आफ्नो अनुहारभरि पोत्छिन् । त्यसपछि बाँकी भएको रगतलाई पानीमा मिसाएर आफूले रोपेका बोट बिरुवामा हाल्छिन् । ‘सिडिङ् द मून’ नामको यो प्रथा विभिन्न पुरानो मान्यतासँग प्रेरित छ जसमा महिनावारीको रगतलाई उर्वरताको प्रतिकको रुपमा हेरिन्थ्यो । यो प्रथालाई मान्ने महिला आफ्नो म�...
एजेन्सी– नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले एकसाथ लन्च वा डिनर गर्न सक्ने यो रेस्टुराँमा ४० जना मानिसले रात समेत बिताउन सक्ने व्यवस्था छ । समुद्र मुनी ३४ मिटर लामो तथा १५ मिटर चौडा काँचको पर्खाल निर्माण गरेर तयार पारिएको यो रेस्टुराँको माथिल्लो भाग एउटा सडक मार्फत मुख्य भूमिसँग जोडिन्छ । काँचको पर्खाल लगाइएका कारण त्यहाँ...
एजेन्सी । ह्वेल माछाको प्रजाति हो । यो ठूलो माछा हो । तर, ह्वेल माछा मात्र पनि होइन । यो मानिससँग पनि नजिक छ । ह्वेल आफंैमा स्तनधारी प्राणी हो । पोथी ह्वेलले बच्चा जन्माउँछ र बच्चालाई दूध चुसाएर हुर्काउँछ । मानिस पनि स्तनधारी प्राणी हो । मानिस र ह्वेलका बीचमा रहेका धेरै भिन्नतामध्ये ह्वेल पानीमा बस्नु र मानिस जमिनमा बस्नु पनि एक हो । तर, पनि यिनै भिन्नता र समानतालाई लिएर...
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला संसारका धनी व्यक्तिले पनि जुठो भाँडा माझ्छन् भन्ने ? धनाढ्यहरुसँग खर्च गर्न पर्याप्त पैसा हुन्छ, त्यसैले उनीहरु आफूले चाहेको सबै सामान किन्न सक्छन् र घरमा जोसुकैलाई काम लगाउन पनि सक्छन् । तर, उनीहरुको जीवन आरामसँग बित्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस् । संसारको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा आउने अमेरिकी प्राविधिक कम्पनी माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल...
काठमाडौं । संसारमा अचम्मका समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । बिहे गरेको एक जोडीले पहिलो पल्ट यौनसम्पर्क गर्दा पाँच पलङ भाँचेका छन् । यो समाचार नेपालको नभएर अमेरिकी राज्य ओहियोस्थित डबलिनमा बस्ने एक जोडीको हनिमुन गज्जबको भएको छ कि जहाँ उनीहरुले पाँच–पाँच पलङ तोडिदिएका छन् । मोटो शरीर भएका उनीहरुले यौनसम्पर्क गर्न खोजेकै कारण पलंङ भाचिएको हो । यो जोडीमा श्रीमानको तौल ३३०...
बढी ह्यान्डसम भएकै कारण चीनमा एक विमानस्थल कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन् । ती प्राविधिक कर्मचारी चीनको दक्षिणपूर्वी सियामेन एयरपोर्टको रनवेमा हिँडिरहेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । अन बोर्ड रहेका एक प्यासेन्जरले उनलाई झ्यालबाट आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका थिए । चीनको लोकप्रिय सर्टं भिडियो प्लेटर्फम ‘टिक टक’उनले सो भिडियो पोष्ट गरिदिए जसलाई छोटो समयमै १०...
अमेरिकामा हालै दुईजना महिलाले ११ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यका ब्रा चोरेका छन् । क्यालिफोर्नियामा दुईजना महिलाले भिक्टोरिया सेक्रेट फेसन हाउसबाट ११ हजार डलर मूल्यका वक्षकवच चोरी गरे । वक्षकवच चोरी गर्ने ती महिलालाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २२ वर्षकी ब्लेका थालिया क्विन्तेरो र १९ वर्षकी एन्टाने रहेको बताइएको छ । ती महिलाहरुले भिक्टोरिया सेक्रेटको...
मानिसले आफ्नो शरीरमा कहिलेदेखि टाटु बनाउन थालेको होला ? धेरैको अनुमान हुनसक्छ यहीँ आधुनिक युगमा । यसअघि अप्रिmकामा मानिसहरुले १ हजार वर्षअघिबाट मात्र सरीरमा टाटु बनाउन सुरु गरेको प्रमाण फेला परेको थियो । तर हालै यस्तो प्रमाण फेला परेको छ जस अनुसार दुनियामा मानिसहरुले ५ हजार वर्षअघिबाटै सरीरमा टाटु खोपाउन सुरु गरेको पाइएको छ । इजिप्टमा झण्डै हजार वर्षअघि मृत्यु भएका दुईवटा...
चिसोका कारण जमेर बरफ बनेको नदीमा मानिसको हातका दर्जनौँ टुक्रा फेला परेपछि त्यसले ठूलो रहस्य सिर्जना गरेको छ । सुदुरपूर्वी साइबेरियास्थित खाब्राओभ्स्क सहर नजिकै अमुर नदीमा ५४ वटा मानव हात फेला परेका हुन् । स्थानीय बासिन्दाले पहिलोपटक जमेको पानीमा मान्छेका हात देखेका थिए । ती मध्ये ५३ वटा झोलाभित्र थिए भने एउटा बाहिरै थियो । ती लास को मानिसका हुन् भन्ने पत्ता लागेको छैन ।...